ဗနက်ရှာ ဂျိမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Portrait by Samuel Luke Fildes, 1895
မာရီ ဗနက်ရှာ ဂျိမ်း (née ကဗင်ဒစ် ဘင်းတင့် Cavendish-Bentinck; ၄ ဇွန် ၁၈၆၁ - ၂ မေ ၁၉၄၈) သည် လန်ဒန် လူမှုရေး ဧည့်ခံသူနှင့် ပြိုင်မြင်း မွေးမြူသူ တဦး ဖြစ်သည်။
ဂျိမ်းကို ပရုဒင်းရှာ (née လက်စလီ)နှင့် ဂျော့ ကဗင်ဒစ် ဘင်းတင့် (၁၈၂၁ - ၁၈၉၁)တို့၏ ကဗင်ဒစ် ဘင်းတင့် မိသားစုမှ မွေးလာသည်။ သူမ၏ မောင်မှာ ဝီလျံ ဂျော့ ကဗင်ဒစ်-ဘင်းတင့် (၁၈၅၄ - ၁၉၀၉)(William George Cavendish-Bentinck) ဖြစ်ပြီး၊ သူမ၏ တူများ ဖြစ်သည့် ဖာဒီနန်နှင့် ဗစ်တာ(Ferdinand; Victor)တို့အား မြို့စား အရိုက်အရာ လွှဲအပ်သော ပို့(တ်)လန် (Portland)မြို့စားကြီးနှင့် နှစ်ဦးစလုံး ဆွေမျိုးတော်သည်၊ နောင်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ကြင်ယာတော် မိဖုရား ဖြစ်လာမည့် လေဒီ အဲလိဇဘက် ဘိုးဝိစ်-လိုင်ယွန် (Lady Elizabeth Bowes-Lyon)၏ ဆွေမျိုးလည်းတော်၊ ခေါင်းကိုင်မိခင်လည်း ဖြစ်သည်။
၁၈၇၂ တွင် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရောက် မာရီ ဗနက်ရှာ ကဗင်ဒစ်-ဘင်းတင့်သည် ထိုခေတ်က ကျော်ကြားသော အော်ပရာ အဆိုတော် ခရစ္စတီးနား နီးဆင်(Christina Nilsson)၏ မင်္ဂလာပွဲ၌ သတို့သမီးအရံ လုပ်သည်။ လက်ထပ်ပွဲသည် အထက်တန်းလွှာတို့ အရေးကိစ္စ ဖြစ်ပြီး၊ လန်ဒန်မြို့၊ ဝက်မင်စတာကျောင်း(Westminster Abbey)၌ ဗနက်ရှာ အဖေက ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ နီးဆင်က သူမ၏ ယောက်ျားလောင်း ပြင်သစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် ဩဂတ် ရိုဇော့(Auguste Rouzaud)နှင့် ကျမ်းကျိန်နေစဉ်၊ ဗနက်ရှာက သတို့သမီး၏ ပန်းစည်းကို ကိုင်ထားရသည်။
ဗနက်ရှာနှင့် သူ့ယောက်ျားသည် လန်ဒန်၊ ဂရက်ဖ်တန်(Grafton) လမ်းတွင် နေထိုင်ကာ ကတန်အိမ်တော်(Coton House) ၌ မြင်းများ မွေးမြူသည်။
သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်သော်လည်း၊ အလွန်တရာ စေးခြုတ်မှုကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ ဧည့်သည်များကို ကြောင်ပင် မသောက်သော နို့များ ဖြင့် ဧည့်ခံကာ သောကြာနေ့တွင် အသားများထက် ငါးများက ဈေးသက်သာ၍ ကက်သလစ်ဥပုသ်ဖြစ်သော သောကြာနေ့တွင် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရန် ပိုသဘောကျသည်။ ၁၉၁၇ တွင် မုဆိုးမ ဖြစ်ပြီး၊ ဆေးရုံကို လှူဒါန်းခဲ့သော သူ့ယောက်ျားကို သတိရသောအားဖြင့် ရပ်ဂဘီ၊ စိန့်ခရော့ဆေးရုံ(Hospital of St Cross, Rugby)၏ အဆောက်အဦသစ် ဆောက်လုပ်ရာ၌ ငွေမတည်သည်။ မြင်းများ ဆက်လက်မွေးမြူ၍ ပြိုင်ပွဲများ ဝင်ပြိုင်ရာ ဗစ်တိုးရီးယား ဖလား(Victoria Cup)နှင့် ၁၉၃၂ ကော်ရိုနေရှင် ဖလား (1932 Coronation Cup) တို့ကို အနိုင်ရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈၈၅ တွင် သူသည် ပြိုင်မြင်းပိုင်ရှင်နှင့် မွေးမြူသူ ဂျွန် အာသာ ဂျိမ်းနှင့် လန်ဒန်၊ စိန့်ဂျိမ်းရှိ ရွိုင်ရယ်ဘုရားကျောင်း၌ လက်ထပ်သည်။ ဗနက်ရှာနှင့် အာသာတို့နှစ်ယောက်လုံးသည် သတ္တမမြောက် အက်ဒွပ်ဘုရင်၏ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ကာ၊ ဗနက်ရှာသည် အာသာ၏ မိန်းမ ဖြစ်၍ ကျော်ကြားသည်။ ဘုရင်ကြီး၏ သီးသန့် အတွင်းရေးမှူး ဖရက်ဒရစ် ပွန်းဆဘီက သူသည် "ဟာသဉာဏ်နှင့် စိတ်ဓာတ်ထက်သန်မှု အပြည့် ရှိပြီး၊ ဘုရင်ကြီးနှင့် လမ်းလျှောက်သောအခါ ရယ်မောစေသည်"ဟု ရေးသားသည်။
ဗနက်ရှာ ဂျိမ်းသည် ၁၉၄၈ ၌ သေဆုံးကာ၊ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် တစ်ရှန်၊ ဂျော့ရွှား ရေးနော့နှင့် သောမတ် ဂိမ်းဘာရားတို့၏ ပန်းချီကားများကို သူ၏ ခေါင်းကိုင်သမီး ဖြစ်သူ ဘုရင်မ အဲလိဇဘက် (ဆဋ္ဌမမြောက် ‌ဂျော့ဘုရင်၏ ကြင်ယာတော်ဖြစ်ပြီး၊ ယခု လက်ရှိ(၂၀၁၇) အုပ်စိုးနေသော ဘုရင်မ အဲလိဇဘက်မဟုတ်ပါ)အတွက် ချန်ရစ်သည်။
↑ "Marriage of Mademoiselle Nilsson"၊ Birmingham Daily, Post Page 4၊ 29 July 1872။
↑ Marriage of Mademoiselle Christine Nilsson and M Rouzaud in Westminster Abbey။ 29 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Summerskill၊ Ben။ "Tax cuts for the well off? That'sabit rich"၊ The Guardian၊ 15 September 2004။
↑ (2013) Rugby From Old Photographs. Amberley Publishing Limited, 33. ISBN 1445630583။
↑ "A Friend of the King"၊ Liverpool Echo၊2May 1917၊ စာ- 3။
↑ House party at Coton House။ Warwickshire County Council။ 1 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brummer, Alex (1998). Weinstock: The Life and Times of Britain's Premier Industrialist. Harper Collins Business, 33. ISBN 0002556766။
↑ Middlemas, Keith (1972). The Life and Times of Edward VII. London: Book Club Associates, 197။
↑ "Friend Left Jewels to Queen"၊ Dundee Courier၊ 30 June 1948၊ စာ- 2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗနက်ရှာ_ဂျိမ်း&oldid=370152" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၂:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။